VW AUDI A2 Auto Parts Fuel Sefa Huni Pulp Pepa 35mm Inner Diameter Anti Rust, China VW AUDI A2 Auto Parts Fuel Sefa Huni Pulp Pepa 35mm Inner Diameter Anti Rust Manufacturers, Suppliers, Factory - TAKUMI AUTO PART
VW AUDI A2 Auto Zvikamu Mafuta Chekuita Filter Wood Pulp Pepa 35mm Inner Diometry Anti Rust
Peugeot / Ford Auto Fuel Sefa 10-15 Micron Kusefa Kwazvo Hupenyu Hwakareba
ISUZU Auto Fuel Sefa , Isina Yakarukwa Fabric Fuel Sefa Replacement For CXZ EXR
High Density Fabric Auto Fuel Sefa, Reusable Fuel Sefa Yakakodzera Toyotas HILUX Revo
High Performance Pepa Fuel Sefa Yakakwirira Precision Anti Humidity Yakakodzera SHODA/VW
zvinhu yellow sefa bepa / huni pulp bepa
Kukura (L * W * H) OEM Standard/Customizede
Warranty 6 mwedzi
setifiketi ISO9001 2008
Usage Bvisa tsvina mupeturu
musika Europe, Russia, Japan, Middle East, Brazil, Africa, Egypt, India, Southeast Asia, Malaysia, Indonesia, Philippines, etc.
Material: Durable Sefa Pepa Media/Yakakwira Density Isiri Yakarukwa Mucheka Usage: Bvisa Kusachena MuPeturu
Application: YeVW AUDI A2 Nhamba: 3C0127434
Sefa yemafuta zvinoenderana nechimiro inogona kuchinjika, inotenderera-yakaiswa, centrifugal; zvinoenderana nehurongwa huri muhurongwa hunogona kukamurwa kuita kuyerera kwakazara, kupatsanurwa mhando. Sefa yemafuta inoshandiswa nesefa zvinhu sefa bepa, magumbeze, mesh yesimbi, machira asiri akarukwa. Makore makumi masere asati asvika, nyika yakashandisa injini yemafuta sefa yekuchinjana. Iri rudzi rwechimiro chesefa ndiyo sefa uye zvimwe zvikamu, sezvitubu, zvisimbiso uye zvimwe zvikamu mugomba resimbi, kuburikidza netsvimbo kune shell sefa uye imwe simbi sefa ine yakagadziriswa yakabatana. Kubatsira kwaro ndiko kushandiswa kwemutengo wakaderera, kungogara kugadzirisa kunogona kutsiva sefa. Chakashata ndechekuti mapoinzi ekuisa chisimbiso akawandisa, kugadzirisa uye kutsiva sefa inogona kudonhedza zvikamu, kutungamira nyore kumaburi, uye kuchinja dambudziko.